Madax Xanuun , Murqo Xanuun Iyo Hurdo La`aan Ma Dareentaa ? Haddii Gariirka Galmada La Gaaro Waad Ka Caafimaadeysaa - Arimaha Bulshada
Faa`idooyin badan ayaa ku jira in haweeneyda gaarto gariirka galmada ( In ay ka dharagto ciyaarta) waxaana xusid mudan in gariirka galmada kaliya faa`idada laga helo aheyn macaanka balse intaa in ka baadan ayaa ku jirta .
Xanuunka Ayuu Yareeyaa : gaar ahaan madax xanuunka nooca goonjabka loo yaqaan (madaxa oo hal gees kaa xanuuna) – sidoo kale xanuunada murqaha . qabsiinada, maxaa yeelay xarunta mas`uulka ka ah waxaa si weyn u saameeya macaanka gariirka galmada iyadoo fal celiska maskaxda ay yareeneyso xanuunadaas .
Dareemidda Farxad :Iyadoo marka la gaaro gariirka galamada in jirka uu sii deynayo Hormone-da kala Aestrugeniu iyo Onorvina kuwaasi oo sara u qaada dareemaha farxada .
Waxa uu xoojiyaa wada jirka : sidoo kale gariirka kalamada ayaa xoojiya in uu jirka soo dayo hormone-ka la yiraahdo Oxitocina ,dadkana ay u yaqaan Hormone-ka jaceylka kaasi oo mas`uul ka ah in uu sara u qaado dareemaha jaceylka .
Hurdo Fiican Ayaa laga Helaa : Gariirka galmada ayaa labada lamaane ka saacida in ay helaan hurdo fiican . xittaa waxaa lala leeyahay gariirka galmada waxa ay qofka ka fogeeysaa in marka uu jiifo uu ku riyoodo riyooyin argagax leh .
Neerfo Xanuunka Ayay Yareysaa : maadaama maskaxda ku mashquulsan tahay bashaalka iyo macaanka ayay gariirka galmadana ka qeyb qaadaneysaa in ay yareeyso neerfo xanuunka .
Indho Qurxoon Ayaad Ka Heleysaa : Gariirka galmada(galmada oo laga dhargo) waxa ay keeneysaa farxadda waxa ayna indhaha ka muujinayaan qanacsanaan oo indho qur qurxoon ayay haweeneyda heleysaaaa.
Hadaba Arimahabulshada.com ayaa ku sheegeysa in gariirka galmada la iska helin oo ay u bahaan tahay in laga shaqeeyo oo jawi dagan iyo qanacsanaan lagu kulmo.